Nhau - Sei vatorwa vasingashandisi danda kana vachiredza? Ivo vanofarira kushandisa hoels reels!
MuChina, kuchine vabati vehove vazhinji vachiri kushandisa nzira yechinyakare yekubata hove, asi hapana kana tsvimbo yekubata kunze kwenyika, uye vanosarudza kushandisa hove dzekuredza. Ndechipi chikonzero? Nei paine mutsauko wakadai? Tevere, tevera KK kuongorora!
1, Fishing nzvimbo
Iyo hoel reel inogona kuita kure-kure kukanda, uye hove renji yakakura kwazvo, uye hove kudzika kwakadzika. Nzvimbo yekubata hove yeruoko idiki, iyo inokodzera chete kune hove kumahombekombe, uye kudzika kwakadzikira.
2, Environmental ezvinhu hove
Iyo hoel reel inogona hove zvakajairika pamusoro pemvura pamusoro nemhepo nemafungu, uye zvinonetsa kucherechedza shanduko yekuyangarara kana ruoko ruoko ruri mumhepo nemafungu, izvo zvinokanganisa zvakanyanya kubata kwekuredza.
3, Nhamba midziyo
Zvinotaridza kuti tsvimbo yekuredza inongoda tsvimbo, tambo, kuyangarara, chirauro uye chirauro. Muchokwadi, inoda yakawanda yezvimwe zvinhu. Avo vakatamba netsvimbo yehove vanoinzwisisa zvakadzama nezvayo.
Zviri nyore kushandisa reel reel yekuredza. Chero bedzi uine tsvimbo, tambo uye chirauro, unogona kusefa pese pese.
4, Kakawanda kuti chirauro kushandiswa
Mabheji anoshandiswa nerese ekuredza hove kazhinji akakura uye haafanire kuchinjwa kazhinji. Kana mabheji enhema achishandiswa, anogona kushandiswa kakawanda. Chirauro chinoshandiswa mudanda ruoko chidiki uye chinoda kuwedzerwa kazhinji.
5, Kumirira maitiro
Kubata hove kunowanzo kutonga kana paine hove inoruma nekurira kwebhero, uye maitiro acho anenge akasununguka. Asi ruoko rwepanda runofanira kutarisisa ichiyangarara nguva dzese, izvo zviri nyore kukonzera kuneta kwekuona kwemaziso.
6, Kubva nemaonero Technology
Kune mitsara yakawanda yekuredza pane hoel reel, iyo inogona kutamba musimba wakanaka wekuburitsa simba uye kuita kuti hove dzirege kuve nyore kukweva
Mutsara wehove wedanda ruoko wakagadziriswa. Kana yakatarisana nehove hombe, inonyanya kuburitsa simba kuburikidza nehunyanzvi uye nekuita kwetsvimbo yekubata hove, iyo ine yakanyanya kudiwa tekinoroji.
7, Kubva pakona yevaraidzo
Kana hove hombe iri pane hoel reel, unogona kunyatsonzwa maitiro ekurwa, ayo ari kushanda zvakanyanya. Kana uchiredza hove hombe padanda rehove, zvinoenderana nesimba rehunyanzvi, uye maitiro acho ari mashoma.
Kune zvekare chokwadi chekuti zvikepe zvekuredza zvinongotsvaga hove pachinzvimbo chekumirira hove kuti dzirume, asi kubata tsvimbo kunonyanya kungomirira hove kuti dzirume.
Kubva pamaonero ehove dzehove
Pane humwe hukama pakati pekuti nei panenge pasina hove netsvimbo yekubata hove kune dzimwe nyika uye hove yakanangwa. Kune dzimwe nyika, mazhinji acho hove huru dzinodya dzimwe mhuka, uye hove dzine zvikepe zvekuredza zvinonyanya kunzwika. Pamusoro pezvo, nyika dzekunze kazhinji dzine mitemo inoda kuti hove diki dziburitswe padzinoibata.
Chinangwa chikuru chetsvimbo hove diki, hove dzakawanda, pane kubata hove "varaidzo"!
Kazhinji kutaura, varedzi vepamba vanowanzo tora hove senzira yekukudziridza kushivirira uye kukudziridza manzwiro, nepo vabati vehove vekunze vachitarisa kuvaraidzo, uye maitiro acho ari nyore uye akananga. Nekudaro, nemukurumbira weLuya muChina, vabati vehove vazhinji vari kutendeukira kuna Luya kunoraura. Zvishoma nezvishoma, ivo vari kutarisisa zvakanyanya kune yakawanda sei yavanobata uye vachitora hove seinonakidza pane kuredza.